“အဘွားမွေးနေ့အတွက် ကျင်းပတဲ့ မွေးနေ့ကိတ်ဖယောင်းတိုင်လေးကို အလုအယက်မှုတ်ကာ ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ ချစ်သုဝေသမီးလေးတွေ ခေတ်နဲ့သစ်တိုရဲ့ ဗီဒီယိုိဖိုင်” - Myannewsmedia
နိုငျငံကြျော အဆိုတျော မငျးသမီး ခဈြသုဝကေိုတော့ အထူးအထှမေိတျဆကျပေးစရာမလိုအောငျ ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျ.။ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးခဈြခငျမှုတှကေို ပိုငျဆိုငျထားသူ ခဈြသုဝကေတော့ အဆိုတျော လငျးလငျးန့ အိမျထောငျကပြွီး ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သမီးအမှာနှဈယောကျရဲ့ မိခငျအနနေဲ့ရော အနုပညာအလုပျတှကေိုပါ ဖွညျးဖွညျးမှနျမှနျ လုပျကိုငျနသေူပဲဖွဈပါတယျနျော.။
ထရီဇာကတော့ သူမရဲ့ သမီးနှဈယောကျအတှကျ အခြိနျလေး ပေးဖွဈသလို မိခငျဖွဈသူအတှကျကိုလညျး အခြိနျပေးကာ ဂရုစိုကျပေးနိုငျတဲ့သူပါ. ။ စကျတငျဘာလ (၁၀)ရကျနမှေ့ာကရြောကျတဲ့ မိခငျဖွဈသူ မှေးနလေ့ေးကို အိမျမှာပဲ မိသားစုဝငျတှအေားလုံးနဲ့အတူတူ ကငျြးပဖွဈခဲ့တဲ့ ပုံလေးတှနေဲ့အတူ သမီးအမှာနှဈယောကျကွောငျ့ ပွုံးပြျောနရေတဲ့ အဘှားဖွဈသူ သူမရဲ့ မိခငျရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို “Today is my Mommy ‘s day” ဆိုပွီး သူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ.။
ပြျောစရာအပွညျ့နဲ့ ပြျောရှငျနကွေတဲ့အခြိနျ ခတျေနဲ့သဈတို့ကတော့ မှေးနပှေဲ့လေးကို ကငျြးပခှငျ့ရလို့ ပြျောနပေုံလေးက ခဈြစရာလေးတှပေါပဲနျော..ပရိသတျကွီး.။ ပရိသတျကွီးအတှကျလညျး ထရီဇာတို့ မိသားစုရဲ့ ပြျောရှငျဖှယျ မှေးနေ့ ကငျြးပနတေဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော.။ ဖတျရှု့ပေးခဲ့ကွတဲ့ ပရိသတျကွီးလညျး ပြျောရှငျသာယာတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ.။
Source :Chit Thu Wai’s Facebook
နိုင်ငံကျော် အဆိုတော် မင်းသမီး ချစ်သုဝေကိုတော့ အထူးအထွေမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင် ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်.။ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ချစ်သုဝေကတော့ အဆိုတော် လင်းလင်းန့ အိမ်ထောင်ကျပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးအမွှာနှစ်ယောက်ရဲ့ မိခင်အနေနဲ့ရော အနုပညာအလုပ်တွေကိုပါ ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် လုပ်ကိုင်နေသူပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။
ထရီဇာကတော့ သူမရဲ့ သမီးနှစ်ယောက်အတွက် အချိန်လေး ပေးဖြစ်သလို မိခင်ဖြစ်သူအတွက်ကိုလည်း အချိန်ပေးကာ ဂရုစိုက်ပေးနိုင်တဲ့သူပါ. ။ စက်တင်ဘာလ (၁၀)ရက်နေ့မှာကျရောက်တဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ မွေးနေ့လေးကို အိမ်မှာပဲ မိသားစုဝင်တွေအားလုံးနဲ့အတူတူ ကျင်းပဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပုံလေးတွေနဲ့အတူ သမီးအမွှာနှစ်ယောက်ကြောင့် ပြုံးပျော်နေရတဲ့ အဘွားဖြစ်သူ သူမရဲ့ မိခင်ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို “Today is my Mommy ‘s day” ဆိုပြီး သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်.။
ပျော်စရာအပြည့်နဲ့ ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့အချိန် ခေတ်နဲ့သစ်တို့ကတော့ မွေးနေ့ပွဲလေးကို ကျင်းပခွင့်ရလို့ ပျော်နေပုံလေးက ချစ်စရာလေးတွေပါပဲနော်..ပရိသတ်ကြီး.။ ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း ထရီဇာတို့ မိသားစုရဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့ ကျင်းပနေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်.။ ဖတ်ရှု့ပေးခဲ့ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်.။
Previous post နာမည်ကြီး အဆိုတော် (၄၅) ယောက် သီဆိုထားတဲ့ ;အောင်လံလွှင့်မည် NLD&သီချင်း MV
Next post “Shopping ထွက်ကာ (၁၀)သိန်းကျော်ဖိုး သူ့ရဲ့အဖွဲ့သားတွေကို အဝတ်အစားတွေဝယ်ပေးဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သက်သေနဲ့တကွပြသခဲ့တဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်”